मेयर भन्छन्, ‘साइकलमैत्री सहर बनाएरै छाड्छौँ’ - बडिमालिका खबर
ललितपुर। हिजोआज तपाईंहरुले ललितपुरको सडकलाई नियाल्नु भएको छ ? छैन भने एक पटक अवश्य ध्यान दिएर हेर्नुहोस् । केहि फरक दृष्यि देख्नुहुनेछ । तपाईंहरुले साघुँरो सडकको दुबैतर्फ साइकल लेन देख्नुहुनेछ ।
केहि दिन अघि मात्र ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल नगर बनाउने भन्दै नगरभित्र साइकल लेनको शुरुवात ग¥यो । नगरलाई साइकलमैत्री तथा पर्यावरणमैत्री बनाउने भन्दै स्थानीय सरकारले नै साइकल लेन अभियान चलायो । थापाथली पुलदेखि कुपन्डोल, पुल्चोक, जावलाखेल हुँदै लगनखेलसम्म जोड्ने सडकमा साइकल लेन छुट्याउने काम भयो । नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भएकै सडकको दायाँ बायाँ लेन कोरेर साइकल लेनको उद्घाटन गरे । महानगरको यो प्रयासलाई साइकल चढ्ने देखि साइकल अभियन्ता तथा वातावरणविद्हरुले प्रशंसा गरे ।
ललितपुरलाई पछ्याउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि साइकल लेनको विषय उठायो । महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य आफै साइकल बोकेर सडकमा उत्रिए । उनले पनि उपत्यकालाई साइकलमैत्री सहर बनाइछाड्ने उद्घोष गरे । त्यसो त शाक्यले आफ्नो चुनावी अभियानमा समेत उपत्यकालाई साइकल सिटी बनाउने भन्दै चुनावी घोषणापत्र बनाएर जनमत लिएका थिए । तर आफ्नो कार्यकालको आधाआधी समय बितिसक्दा समेत साइकल सिटीको बारेमा चुइक्क नबोलेका शाक्यलाई ललितपुरको साइकल लेन अभियानले एकाएक ततायो ।
साइकल लेन कति व्यवहारिक ?
उपत्यका भित्रका सडकहरुमा साइकल लेन निर्माण गर्नु र प्रयोगमा ल्याइनु नराम्रो कुरा होइन । साइकल सिटीको रुपमा समेत उपयुक्त मानिएको काठमाडौँ उपत्यकामा साइकल लेन छुट्याएर साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो । तर, यसो भन्दैमा हतार हतार ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले सफलता पाउछ भन्ने छैन । जुन पहिले नै शुरुवात गरिसकिएको माइतिघर–तीनकुने साइकल लेनले देखाइसकेको छ । यो उदाहरणलाई हेरेर भएपनि सरकारले साइकल लेन बारे सहि नीति लिनुपर्ने हो । लेनको दीर्घकालिनता, व्यवहारिकता र प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै साइकल लेन निर्माण गर्नुपर्ने हो । अहिलेको ललितपुरको साइकल लेन भएकै सडकमा दायाँबायाँ कोरिएको छ । मात्र सिम्बोलिक संकेतले लेन चिन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सधैजसो सवारी चाप पर्ने सडकमा साइकल लेन कसरी प्रयोगमा आउँला ?
योजना डिजाइनर महानगरका प्रतिनिधिहरु के भन्छन् ?
प्राथमिकताका आधारमा सडकमा साइकल लेनको सुरुवात गरेको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन बताउँछन् । सहरलाई व्यवस्थिति बनाउने र साइकलमैत्री सहर बनाउँदै वातावरणीय सन्तुलत गराउने लक्ष्य रहेको मेयरको भनाइ छ ।
‘बढ्दो सवारी चाप र वायुप्रदुषणलाई ध्यानमा राख्दै ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल प्रयोगलाई प्रत्साहनको नीति लिएको छ । त्यसैका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन हामीले साइकल लेन निर्माणको कार्यथालनी गरेका छौँ,’ मेयर महर्जनले भने, ‘साइकल लेनका लागि उपयुक्त सडक पूर्वाधार नभएपनि सेयर राइडिङ्गको मान्यतामा साइकल लेन छुट्याउने काम भएको छ । यसले साइकल प्रयोगलाई केहि सहजता र प्रत्साहन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
महर्जनका अनुसार अहिले महानगरले साइकल लेनसम्बन्धी ऐननै बनाएको छ । जसले साइकल लेन र प्रयोगसम्बन्धी नियम बाँध्नेछ । सडकमा छुट्याइएको साइकल लेनमा अन्य सवारी साधन जान पाउने नपाउने र जरिवान सम्मको व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रारम्भिक रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाले ऐन बनाए पनि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका सबै नगरहरुले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको महर्जनले जनकारी दिए ।
ललितपुर महानपालिकाले पहिलो चरणमा थापाथली पुलदेखि कुपन्डोल, पुल्चोक, जावलाखेल हुँदै लगनखेलसम्म जोड्ने सडकमा साइकल लेन छुट्याएको छ । पहिलो चरणमा सो क्षेत्रमा साइकल रुट बनाएर अघि बढेको नगरले दोस्रो चरणमा लगनखेलबाट मंगलबजार र पुल्चोकबाट मङ्गलबजारसम्म पनि साइकल रुट बनाउने योजना बनाएको छ । यसका लागि महानगरले पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटबाट ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने, यसै आर्थिक वर्षमा पनि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । नगरभित्रका सडकमा साइकल लेन छुट्याउने देखि स्तरउन्नती गर्ने र लेनसँगै साइकल स्ट्यान्ड वा साइकल पार्किङ्ग समेत निर्माण गर्ने महानगरको योजना छ ।
अहिले भएकै सडकको दायाँ बायाँ छुट्याइएको लेनलाई व्यवस्थित गर्न र साइकल यात्रीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन महानगरले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा साइकल ऐन ल्याइने तयारी समेत गरिरहेको छ ।
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि साइकल लेनलाई प्राथमिकता दिँदै माइतीघर–तीनकुने साइकल लेनलाई पुनर्जीवन दिने भएको छ । माइतीघर देखि तीनकुनेसम्मको साढे दुई किलोमिटर दुरीको दुईतर्फी लेनलाई व्यवस्थित गर्दै साइकल लेनको निरन्तरता दिने नगरको योजना छ । जुन लेन पहिले नै निर्माण गरिएको थियो ।
२०७० सालमा सरकारले ठूलै तामझामका साथ उद्घाटन गरिएपनि उचित व्यवस्थापन नपाउँदा साइकल लेन केबल पार्किङ्गस्थल र सामान थुपार्ने स्थल मात्र बन्न पुग्यो । कतिलाई त आजसम्म पनि सो क्षेत्रमा साइकल लेन छ भन्ने सामान्य जानकारी समेत छैन । मुख्य सडकको सतहभन्दा अलि माथि उठेको ट्याक्टाइल पेभिङसहितको बाटो नै साइकल लेन हो । तर उक्त लेन अहिले पैदल बाटो र पाकिङ्ग स्थल बन्दै आएको छ । सोही लेन अहिले महानगरले पुनः प्रयोगका लागि भौतिक संरचनागत सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि पहल थालेको हो ।
माइतिघर–तीनकुने साइकल लेन गुरुयोजनाका लागि महानगरले तीन करोड खर्च गर्दैछ ।
साइकल लेन कस्तो हुनुपर्छ ? मापदण्ड के ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका आधारमा साइकल लेनको मापदण्ड कम्तिमा पनि एक दशमलव २ मिटरको हुनुपर्छ । सरदर १.२ मिटर देखि २ मिटर सम्मको लेन हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । यो लेन अन्य सवारी साधनले प्रयोग गर्ने लेनभन्दा बाहिर हुनुपर्ने नियम हो । त्यसमा सडकको अवस्था हेरी तीन तरिकाले साइकल लेन छुट्याउन सकिन्छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका हिसाबमा डेडिकेटेट, कन्ट्राफ्लो र एडभाइजर गरी तीन पद्धतिमा साइकल लेन प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसमा अहिलेको ललितपुरको प्रयोग एडभाइजर पद्धतिको हो । जुन त्यति प्रभावकारी र व्यवहारिक मानिदैन । भएकै सडकलाई साझेदारीको रुपमा प्रयोग गर्ने पद्धति भएकाले अन्य सवारी साधनले साइकल लेन मिच्ने र साइकल यात्रीको सुरक्षा समेत नहुने हुन्छ । तर सडकको अवस्था र संरचनाका आधारमा राईड सेरिङ्गको मान्यतामा सडक भित्रनै छुट्याउन सकिने नेपाल साइकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष तथा प्राविधिक विज्ञ सोमराज राना बताउँछन् ।
‘हुँदै नहुनुभन्दा कम्तिमा प्रयोगको थालनि राम्रो कुरा हो । जुन ललितपुरमहानगरपालिकाले गरिरहेको छ । यसमा हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ,’ रानाले भने, ‘राइड सेरिङ्ग नेपालमा मात्र होइन अन्य विदेशी सहरहरुमा पनि हुने गर्छन् । त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने केहि छैन । सबै ठाउँमा डेडिकेटेट(छुट्टै) साइकल लेन हुनैपर्छ भन्ने छैन । केहि सहज ठाउँहरुमा यो पद्धती पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’
अर्को कन्ट्राफ्लो पद्धति भने एकतर्फी बाटोमा प्रयोग गर्न सकिने साइकल लेन हो । जुन अन्य सवारी साधनलाई एकातर्फी भएपनि साइकललाई दुईतर्फी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणामा बनाइएको हुन्छ । जुन हाम्रा सहरका बाटोहरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
‘यी तीन पद्धतीहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो सुरक्षित र व्यवहारिक भनेको डेडिकेटेट पद्धतिनै हो । तर, यो हाम्रोमा प्रयोग गर्न अत्यन्त कठिन छ । ललितपुर र काठमाडौँका साना र साघुँरा रोडमा कसरी प्रयोग गर्ने ? तर बाहिरी चक्रपथ सडकमा भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ राना भन्छन् ।
अहिले पहिलो चरणमा उपत्यका भित्रका सडकहरुमा प्रयोग थालनि गरिएपनि चक्रपथमा पनि यो साइकल लेन छुट्याइनु पर्ने साइकल सोसाइटीको माग छ । त्यसका लागि ऐन नियम नै बनाएर चक्रपथ सडक खण्डमा साइकल लेन छुट्याउन यातायात मन्त्रालय तथा संवन्धित कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको रानाले जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश सहरहरुमा साइकलको प्रयोग बढेर गएको छ । बढ्दो प्रदुषण, सवारी चापलाई र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सहरहरुमा साइकलको प्रयोग बढ्दै गएको हो । युरोपेली मुलुक, अमेरिकी तथा अन्य विकसित मुलुकहरुका प्रसिद्ध सहरहरुमा समेत साइकलको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसका लागि त्यी क्षेत्रहरुमा साइकल लेनको उचित व्यवस्थापन गरिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा उपत्यका भित्र भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पर्यावरणीय सबै दृष्टिकोणले साइकल लेनको आवश्यक छ । त्यसमाथि सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरु मध्ये सबैभन्दा कमजोर र निर्भिक साधनको रुपमा साइकललाई लिने गरिन्छ । तर, यहाँ भने साइकललाई सवारी साधननै होइन भन्ने सम्मको मानिसकिता राख्ने गरिन्छ । सडकमा धेरै हेपिने साधनसमेत साइकल नै हो । यस्तो समस्या समाधानका लागि साइकल लेन अपरिहार्य छ । तर आवश्यकता छ भन्दैमा बिना तयारी यसलाई कार्यान्वयन गर्दा फेरि यसको हालत पनि माइतीघर तिनकुने साइकल लेनकै हालत त हुने होइन भन्ने आशंका त्यतिकै छ ।
भ्रम छर्ने ३६ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण, १४ अनलाइन ब्लक
“रुक्सल”को मुक्तक सुनसान भएको बस्ति
बुटवलमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
तिन सय भन्दा बढि नेपालि सिमानमा अलपत्र
उनकाे दैनिकी लकडाउनले पनि बदलेन ( फाेटाे फिचर )